Ukunyamekela ekhaya kwesikhumba esinamafutha
Isikhumba esinamafutha yesikhumba esikhipha amaninzi amanqamlezo ephuma kwiindawo ezinobulunga. Olu hlobo lesikhumba lwenzeka kubantu abatsha ngexesha lokukhulelwa kunye nakwabanye abasetyhini ngexesha lokuyeka. Kwakhona kungenxa yezifo zeengqungquthela zokuvalwa kwangaphakathi, ukuphazamiseka kwemisebenzi yesimiso senzwa kunye nokuba usebenzisa kakubi i-fatty and spicy food. Abantu abanesikhumba esinamafutha kufuneka badle imifuno nezithelo. Ngaphantsi kwefuthe lokufudumala kunye nomswakama ophezulu kwesikhumba esinamafutha, ukuthobela uthuli, ukwandisa izilwanyana, ngenxa yeso sizathu sohlobo lwesikhumba esinamafutha kufuna ukunyuselwa okongeziweyo. Kwiimeko ezinqabileyo, isikhumba seoli sizuza i-huy, i-gray hue. Iimfihlo zomeleleyo eziqinileyo zenzeke ebunzini, enqeni kunye namaphiko empumlo. Ukunyamekelwa kwekhaya kwesikhumba esinamafutha kuya kunceda ukuphelisa iingxaki ezininzi.
Umxholo weoli uyancipha xa uneminyaka yobudala, kodwa kubonakala ukuba imibimbi ibonakale. Isikhumba se-oily sihamba kancane, kwesi sidima sakhe. Kukho iindlela ezininzi zokupheka ezingenziwa ekhaya, ziya kunceda umzimba wakho unciphise ukukhutshwa kweoli kunye nokwenza ulusu lukhangele.
I-recipe yokuqala - thabatha i-apula yasendle kwaye wenze unamathisele kuyo, sebenzisa kuwo wonke ubuso obusweni nentamo, ushiye imizuzu engama-20, uze uhlambe ngamanzi afudumele. Iresiphi elandelayo iya kunciphisa imibimbi kunye nesikhumba. Kuye, udinga i-sandalwood powder, kufuneka udibanise amaconsi ambalwa kuwo kwaye usebenzise unobumba ebusweni bakho. Silinde de lide, size sihlambe. Ukuze uhlaziye ubuqhetseba bakho, siya kuyidinga ijusi ye-lemon, umgubo, umgubo we-turmeric powder. Kukho konke oku, kufuneka wenze unobumba. Sibeka unamathisele ebusweni bonke. Lindela ade idle, hlanza ngamanzi. Enye indlela elula yokunciphisa isikhumba. Sidinga ioli yegorosi emhlophe. Kubalulekile ukuhlalisa ubuso bakho ngale oli. Emva koko, shiya iyure enye, uze uhlambe.
Ukwenza ulusu lucoceke kwaye lukhusele ukubunjwa kweempuphu, kukulungele ukusebenzisa ubisi. Kunokwenzeka ukuhlamba ubuso bakho ngamaxesha amaninzi ngemini. Ukuze ususe i-makeup, ungasebenzisa ezimbini iintlanzi zeoli ye-sandalwood kunye neepunipoli ezimbini zobisi. Zama ukuhlambalaza isikhumba sakho kakuhle.
Ukuthintela imibimbi kunye nokunyusa isikhumba sakho, u-honey uyona khetho olukhethekileyo. Faka isicelo esinobuncwane obunobuncwane ngemizuzu eyi-15, uze uhlanza amanzi apholileyo. I-Nesto-imisele isikhumba esinamafutha emvula kwimvula yamanzi, kuba ngelo xesha iingqungquthela ezixhamlayo zisebenza kakuhle.
Ukulinganisa umswakama wesikhumba, indlela efanelekileyo yokusebenzisa ukutshiza 3 - amaxesha amane ngeveki. Ukuze senze oku, sidinga isipuni se-1 selayisi, i-tablespoon enye yomgubo kunye namaconsi ambalwa ejisi lemon. Kuzo zonke izithako, yenza unamathisele kwaye usetyenzise kwesikhumba ebusweni, ngokucoca ngobumnandi kwisisetyhula, uze uhlambulule. Unokwenza uhlahlo lwebuso kwiipunipoli ezimbini ze-alimondi, i-tablespoon enye ye-lemon peel kunye neepunile ezintathu zebisi. Kwenzeka nakwicala lonke lobuso kunye nokucoceka kakuhle.
Ukuba unobumba obumnyama phantsi kwamehlo, ngoko ungasebenzisa iitapile kunye nekhukhamba, uthathe amacwecwe. Vala amehlo akho ufake iiplati ezimbini kwiibhokhwe zakho. Ungenza kwakhona iimaski zokuhlambuluka ngokujulileyo kwesikhumba sakho. Ngokomzekelo, i-mask eyenziwe ngodongwe ihlambulula ilusu. Kuya kufuna ezimbini iipuniwe zodongwe oluhlaza, amaconsi amabini e-lemon juice, i-tablespoon enye yobusi, enye ipoyiji ye yogurt ngaphandle kwee-additi ezinamakha, amaconsi amabini eoli ye-lavender namanzi. Kuzo zonke izithako, yenza unonti we-cream, usetyenzise eluswini lobuso uze ulinde de lime. Emva koko uhlambe ngobumnene ngamanzi afudumeleyo.
I-mask ye-softness yesikhumba iya kunceda. Kuya kuthatha iipunipoyi ezi-2 zobumba, i-tablespoon enye ye-oats, i-tablespoon eyodwa ye-cornflower kunye namanzi. Hlanganisa yonke into de iifom. Sifaka elukhumbeni size siwume. Emva kwemizuzu engama-20 emva kokumisa, sukuma.
Kukho imithetho emininzi yokunakekelwa kwekhaya ngesikhumba seoli. Umthetho wokuqala: isikhumba esinamafutha asinakuhlamba ngamanzi atshisayo, njengoko oku kukhuthaza umsebenzi weengqungquthela ezihlambulukileyo. Kungcono ukuhlamba ngamanzi abandayo, kunceda ukunciphisa ama-pores kunye nokuthintela isikhumba. Ngokuhlwa, kukulungele ukusebenzisa izilwanyana ezikhethiweyo, umzekelo, utywala obunxilisayo. Into ephambili apha akuyi kuomisa isikhumba.
Umgaqo wesibini ngu: sebenzisa i-powder fluffy kwi-cream yamanzi yansuku zonke, kwaye ngeli xesha ususe amanqatha amaninzi kunye ne-napkin. Oku kuya kunceda ukugcina imveliso. Sebenzisa izigulane zabantu ngokunyamekela kwesikhumba. Ziyathintela kakhulu ulusu, lwenza lube lukhulu kwaye lunwebe ngakumbi, kwaye lususe yonke i-gloss excessively.
Ekhaya, iindlela eziphambili zokususa i-milk makeup, ezisetyenziselwa ukucoca, kunye nokususa ubisi ngoncedo lwamanzi apholileyo kunye nesiponji. Ukuba awukwazi ukwenza ngaphandle kwensipho, yindlela efanelekileyo kakhulu kuwe yindlela yokususa i-makeup kunye ne-gel yokuhlanza okanye i-foam. Faka isicelo esikhwameni samanzi, ukuxilisa kude kube yindawo yokwenza i-foam, uze uhlambulule ngamanzi. Ungasebenzisa kwakhona iimveliso ezizodwa zokuzihlamba zokuhlanjululwa kwesikhumba seoli. Kumele kuqinisekiswe ukuba i-acaric acids, i-fat oil kunye nayo yonke into eyenza ulusu lube lukhulu kunamafutha aluhlambulukanga. Oku kunempembelelo embi kulolu hlobo lwesikhumba, njengoko luhlanjululwayo kunye nezibonda zobuso zinyanyiswa. Musa ukulibala ukuba amanzi ashushu kunye nesepha ziyabhubhisa lolu hlobo lolusu.
Emva kokususa i-makeup, kufuneka usebenzise i-lotion ekhe Ngokuqhelekileyo umlinganiselo wesikhumba, ulungelelanisa ukusebenza kweengqungquthela ezixhambileyo, kuvimbela ukuvuvukala kunye nokunciphisa ama-pores. I-lotion yesikhumba esinamafutha kufuneka ibandakanye i-chamomile, i-plantain, i-calendula kunye ne-coltsfoot, kunye ne-suppressidal supplements, i-menthol, isihlahla somthi, i-eucalyptus, i-camphor ifanele ibe khona.
Emva kwesilwanyana, sebenzisa ukhilimu. Kubalulekile ukuba ukhilimu awufanele ube nesibindi. Ngenxa yesi sizathu, kufuneka ufunde ngokubunjwa kokhilimu. Okokuqala, qwa lasela ubukho bamafutha kwi-cream. Kulunge ukuba ngaba bancinane kangangoko kunokwenzeka, kwaye kubaluleke kakhulu, ukuba akukho i-petrolatum, i-stearic acids kunye namafutha omaminerali. Ngokuhlwa, sebenzisa i-cream emulsion. I-cream e-absorption eyaziwayo ngokuqhelekileyo eyenza umsebenzi weengqungqungquthela ezihlambulukileyo. Oko, kunjalo, kuthintela ukuvela kwesibindi.
Kufuneka kukhunjulwe ukuba kukhuthazwa ukuba kuhlambuluke ngokucokisekileyo okuphindwe kathathu ngeveki. Ukwenza oku, kufuneka usebenzise izihlwitho, iimaski, kunye nokuba ulusu luvutha, kuyacetyiswa ukuba usebenzise iifayile zefilimu. Ukulungelelanisa isenzo seengqungquthela ezixhasayo ngeeveki ngeeveki, kuyimfuneko ukwenza iimaski ezincitshisiweyo kunye neempembelelo ezichasayo. Amaski okuzenzela ukulungiselela ayinzima kwaye akayi kufuna iindleko ezinkulu. Ngokomzekelo, ukusetyenziswa kwemaski yokuqokelela imfuyo kunomphumela wethoni. Ngaloo nto uya kufuna enye ipoyiji ye-yarrow, i-nettle, i-camomile eyomileyo, i-calendula, i-coltsfoot. Kufuneka ukuba udibanise kwaye uqhekeze yonke into. Emva koko ufeze umxube ngamanzi abilayo kwaye uvumele ukuba ubhalele imizuzu engama-20. Emva koko kufuneka udle amanzi amaninzi. Ubunzima obushushu obufanele bumele bube bubekwe ngokusesikweni kwesikhumba kwaye bubekwe ngethambo. Shiya imizuzu engamashumi amabini uze uhlambe. Umsele oseleyo uhlanjululwa ngamanzi abilisiwe 1 ukuya kwe-2, ngokulandelanayo, athululelwe kwi-mold mold kunye neqhwa. Ngentsasa, gubungela isikhumba sakho. Kukho enye imaski. Ngaloo nto uya kuyidla imvubelo, apho sifaka amaconsi amabini e-hydrogen peroxide. Faka isicelo kwisithuba imizuzu eyi-15-20, uze uhlambe ngamanzi.
Zonke izenzo ezingenhla azifani, ngenxa yokuba unokuphucula ukubonakala kwesikhumba sakho seoli. Ezinye iiprogram, ezibandakanya "ukucoca", zinokukunikezela ngobuhle.
Okokuqala, ukukhupha isistim. Kuye, kusetshenziswe i-tonic ekhethekileyo kunye ne-emulsions, enefuthe le-bactericidal. Emva koko, ukuhlanjululwa ngokucokisekileyo kwesikhumba ngoncedo lwamalungiselelo aqulethe iziqhamo ze-acids, kwaye kunye nezikhwama ezikhethekileyo kunye nezihlunu zesikhumba seoli.
Okwesibini, oogqirha bakunika ukuphefumula - ulusu luhlambulukile ngoncedo lwesistim esiphumela i-jet ephezulu. Le nqubo iququzelela ukucoca ngokucwangcisiweyo komsebenzi. Ukucocwa kwamatshini kwenziwa nge-loop ekhethiweyo okanye i-spoon. Eyona mphumo engcono, inkqubo iya kwenziwa kwiiseshoni ezi-3 ukuya kwezi-5.
Okwesithathu, uya kunikwa i-darsonvalization - isikhumba sichaphazelekayo ngeendlela ezikhethileyo zamagulane. Unomphumo wokumisa kunye nomphumo ochasayo. I-Cryotherapy kunye ne-nitrogen yamanzi iyasetyenziswa. Kufuneka kuqatshelwe ukuba i-cryotherapy ifanelekile kwesikhumba esinamafutha kunye namabala amaninzi. Emva koko, uya kunikwa imaski eyanciphisa ama-pores, anefuthe lokupholisa kunye ne-antiseptic. Emva kweso sikhwama, isikhumba sakho siza kuba matte kwaye akuyi kubakho iimpawu ezibonakalayo zokucoca ngomatshini. Emva kwemaski, sebenzisa ukhilimu wesikhumba esinamafutha. Ukudibanisa kunye ne-massage yokwelapha ukhilimu unempembelelo yokusombulula, oko kukuthi, ukuvuvukala akuyi kubakho umkhondo osekhohlo.
Ukuba ubeka iliso lakho ulusu, uya kuphawula ukuba utshintsha njani ubudala. Emva kokudlala iminyaka engama-25, uya kuqaphela ukuba ulusu lwakho luya kuziva luba lume kwaye lubomile. Oku kwenzeka ngenxa yokuba ubuninzi bezinto ezigcina umswakama buncipha ngobuncinane. Kwakhona, uvelwano luya kwanda, kwiimeko ezinqabileyo, kukho ukutshutshiswa nokucaphukisa.
Emva koko, kuya kufuneka utshintshe ukunakekelwa kwesikhumba sakho ngokuhambelana nomgangatho omtsha.
Ulutsha olungunaphakade: umgca ohlaziyiweyo weSwitzerland Line ngeDenmalab Cell Shock
Imifuno, iziqhamo kunye namajikijolo ubuhle
Ubunjani besikhumba ebomzimba, izilwanyana zamalungu
Amanyathelo okulungisa abantu kunye nokukhawuleza kokukhula kweenwele
Iipops zeentsana ezisandul
Yintoni okufuneka uyithengele umntwana
Ukunyaniseka, ukungcatsha, ukuthembela kubuhlobo
Uxolo oluphelile lukhutshiwe: uKarina Mishulina uphinde uxoshe iTurur Eremeev
Ubawo ubaphathe njani xa umntwana ezalwa?
Ababukeli bathanda ukuphela okuvuyisayo
Iifatata ezibhaka kunye nebhekoni